ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် နိုင်ငံရေး တန်းတူညီမျှမှု ရရှိရန် လိုအပ်ဟု ABSDF ပြော | Mizzima Burmese
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် နိုင်ငံရေး တန်းတူညီမျှမှု ရရှိရန် လိုအပ်ဟု ABSDF ပြော
နေမျိုး | သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၄၂ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ရရှိရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများနှင့် အခိုင်အမာ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး (ABSDF) က ထပ်လောင်းပြောဆိုလိုက်သည်။
ပြောင်းလဲမှုများကို တိုင်းတာရာတွင် ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ မြေယာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ အတွက် ယခုအချိန်အထိ ပြည်သူများ တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ကြာသပတေးနေ့ (ABSDF) ထူထောင်သည့် ၂၄ နှစ်မြောက်နေ့ တွင် ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသံခဲ က ပြောသည်။
“ဒီနေ့ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူ ညီတူ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိရှိဆွေးနွေးဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့ချင်းဆွေးနွေးတာက တစ်ပိုင်း၊ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးဆိုင်ရာ လဏ္ခာဆောင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ ဆိုတာက အားလုံးစုဆုံ
ဆွေးနွေးမှပဲရမယ်။ အင်အားစု အားလုံးပါဝင်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ လိုအပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ (မ က ဒ တ) ကထင်တယ်” ဟုဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို မှန်ကန်စွာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာခွင့် မရှိသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်၏ သမိုင်းသင်ခန်းစာများကို ကောင်းစွာထုတ်နှုတ်သင့်ကြောင်း သူ က ဆက်ပြောသည်။
“တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ နေရာမှာ Justic လို့ခေါ်တဲ့ တရားမျှတမှု၊ Equality တန်းတူညီမျှမှု ၊ Political Right လို့ခေါ် တဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တွေရှိမှသာလျှင် ရေရှည်တည်တန့်နိုင်မယ့် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကို ရမယ်။ ဒါမှသာလျှင် တိုင်းပြည်အတွက်၊ လက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် ခိုင်မာတဲ့ အခင်းအကျင်းတစ်ခု ပေါ်ထွန်းမယ် လို့ ယူဆပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
တစ်ဖက်တွင် အပစ်ရပ်ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် တိုက်ပွဲများဆင်နွဲနေခြင်းသည် တစ်ဖက်နှင့် တဖက်ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်စေပြီး အကန့်အသတ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း မဇ္စျိမ ကို ပြောသည်။
“တစ်တိုင်းပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု ရှိရှိနဲ့ အစိုးရသစ်ကိုယ်တိုင်ကမှ စတင်ပြီး လုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အခင်းအကျင်း မရောက်သေး သရွှေ့ကတော့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အကန့်အသတ်ကြားက လုပ်ဆောင်ရတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ယုံကြည်မှု ရှိဖို့ အတွက်ဆိုရင် တစ်မျိုးသားလုံး၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အခင်းအကျင်းတွေ ဖန်တီးဖို့ လိုတယ်။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယနေ့ (မ. က. ဒ. တ) ထူထောင်သည့် ၂၄ နှစ်ပြည်အခမ်းအနားကို KNU တပ်မဟာ ၇ နယ်မြေတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ် အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးမှ ပေါက်ဖွားခဲ့သည့် ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ခဲ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှ လွှတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်ပေါ်ထွန်းရေး လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူလူထု၏ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုအုံကြွမှုအား စစ်တပ်မှ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းလိုက်ပြီးနောက် လက်နက် ကိုင် တော်လှန်ရေးလုပ်ရန် နယ်စပ်ဒေသများသို့ ကျောင်းသားလူငယ်များ
ထောင်နှင့်ချီ၍ ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြခြင်း လည်းဖြစ်သည်။
တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်း မကဒတ တပ်ဖွဲ့ဝင် ရဲဘော် ၆၂၇ ဦး၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ရဲဘော် ၃၉၉ ဦး ပေးဆပ်ခဲ့မှု အား အလေးအနက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ABSDF တို့အကြား ဆက်လက်ညှိုနှိုင်း
ဆွေးနွေးရန် ရှိသော်လည်း အချိန်နှင့်နေရာ သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။